अनलाइन खोजी - आशिष भएको अनलाइनमा धेरै अनुहार हुन सक्छ
Online Search | मिडिया इन्टरनेट
अनलाइन लतको लक्षणहरू र कारणहरू
तपाईं कसरी अनलाइन लतको उपचार गर्न सक्नुहुन्छ?
के मेरो बालबालिकालाई अनलाइन परिक्षण गरिन्छ?
अनलाइन किनमेल उपलब्ध छ? सिद्धान्तमा, मानिस हरेक दिन उनीहरूको दैनिक जीवनमा मुठभेडको आदी हुन सक्छ। टेलिभिजनका साथै पनि रक्सीबाट, सिगरेट वा खाना। निस्सन्देह, इन्टरनेट उमेर पछि पनि।
एक लत संधै विशेषता हो कि यस लत इन्टरनेट मा नशे मार्गिक पदार्थ को बिना रहन सक्दैन। यो लत अनलाइन हुन सक्छ धेरै अनुहार हुन सक्छ र केटा र केटीहरूमा फरक छ। आज सात इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरू मा कथित रूपमा यो लतले प्रभावित हुन्छ। बीचमा, अनलाइन लत आधिकारिक रूपमा एक रोगको रुपमा मान्यता प्राप्त छ।
अनलाइन सेक्स तुलना
अनलाइन लतको के हो भन्ने आधारमा अन्य व्यवहारहरू अग्रभूमिमा छन्। तथापि, तथ्य यो हो कि पुरुष सेक्स अत्यधिक अनलाइन खेल को गुमनाम हुन्छ।
चाहे मौका वा युद्ध को खेल यहाँ महत्वपूर्ण छैन, यो कम्प्यूटर मा खेल को अत्यधिक चरित्र को बारे मा अधिक छ।
महिला र केटीहरू प्रायजसो फोरमहरूमा हुने सम्भावना हुन्छ, प्लेटफर्म साझेदारी गर्दै र गैर-स्ट्याट च्याट गर्दैछन्। कम्प्युटर घडीको वरपरमा चलिरहेको छ, केहि पनि बिना काम गर्दछ।
निस्सन्देह, लत र बारम्बार प्रयोग बीच लाइन यसरी तपाईं पनि अनलाइन लत बाट टाढा जस्तै पहिचान भइरहेको सक्नुहुन्छ, सुरुमा बगिरहेको छन्। तथापि, तपाईं सधैं माथि कम्प्युटर मा रात अबेर बस्छन भने, साथीहरू वास्तै र थप र बरु वास्तविकता भन्दा, भर्चुअल संसारमा थप withdraws कम्प्युटर, आफ्ना भोजन लिन सुरु गर्ने साना, संभावित अनलाइन लत छ सोता या त बन्ने उच्च जोखिममा।
मिडिया साक्षरता - स्मार्टफोन्सन र कम्प्यूटरहरु लाई संभाला
साथै शारीरिक असुविधाले यसको साथ अनलाइन लत ल्याउँछ। आँखाका समस्याहरूसँग पनि दुखाइ र तनाव पनि हुन सक्छ, धेरैजना बसिरहेका छन्। शरीर को हेरचाह अन्य लतहरु संग धेरै उपेक्षा गरिएको छ। यो पनि उपेक्षा को रूप मा जान सक्छ।
अनलाइन लत रोग छैन, किनभने अनलाइन लत अर्को मानसिक विकार पछि सबै भन्दा। अनलाइन लत अक्सर, depressive लक्षण, फिक्री विकार र अन्य व्यक्तित्व विकार संग सम्बन्धित छ यो यी रोगहरु को एक लक्षण थिए जस्तो छ।
वास्तविकता धेरै अनिश्चित देखिन्छ, केवल आभासी संसारले सुरक्षा दिन्छ। अन्य नशे को जस्तै अनलाइन नशे को स्वयं को सम्मान अक्सर कमजोर छ। यदि कम्प्युटर बन्द छ भने, वा इन्टरनेट प्रयोग गर्न असक्षम छ, चिन्ता जस्ता, बेजोड, र अवसाद जस्ता लक्षणहरू देखा पर्छ।
अन्य सबै लतहरु संग, लत प्रवेश पहिलो आउछ।
वयस्कों को लागि अनलाइन लत
अनलाइन लत एक पटक पहिचान र स्वीकार गरिएको छ, यो अक्सर सहयोगी लत साँचो कारण छानबीन गर्न एउटा विज्ञ परामर्श गर्न, कि छ, माथि उल्लिखित मानसिक अघि विकार को एक निहित छ।
यदि यो व्यवहार गरिन्छ भने, अनलाइन लतले पनि एक सीट लिन्छ। रोगीलाई थाहा छ कि इन्टरनेटले समस्याहरू समाधान गर्न सकेन।
सुरुमा, यो रोजगारीका लागि चरण द्वारा इन्टरनेट टाइम चरण काट्न मद्दत गर्दछ: बागवानी, हिड्ने, खाडी साथी, साथीहरू भेट्न।
यो सामान्य व्यवहार शाब्दिक जान्न सकिन्छ। यस-समयमा र यसभन्दा बढी स्वयं मद्दत समूहहरू ठूलो मद्दत हुन सक्छ।
तपाईंको आफ्नै बच्चाले प्रभाव पारेको छ कि यस लत माथिको लक्षणहरूद्वारा पहिचान गर्न सकिन्छ, कम से कम यो जोखिम हुन सक्छ कि क्या जोखिम छ। सतर्क हुनुहोस् र तपाईंको बच्चा इन्टरनेटमा बितेको समयको एक नोट बनाउनुहोस्। त्यो एक्लै धेरै अर्थपूर्ण छ।
यदि तपाइँसँग चिन्ता छ भने, विशेषज्ञको साथ एक नियुक्ति सहयोगी हुन सक्छ। यसबाहेक, तपाईले निश्चित रूपमा खपत को विनियमित गर्नु पर्छ र तपाईंको बच्चाहरु लाई खेल गरिरहेको छ र धेरै साथीहरु संग एक साथ, यकीन छ कि इन्टरनेट को बिना को उपयोग गर्नु पर्छ! जो एक सामाजिक जीवन बिताउने कोहिमा नै कमजोरी हो!
Cyberbullying | मिडिया इन्टरनेट
मिडिया - इन्टरनेट स्मार्टफोन पुस्तकहरू
छोराछोरीको पुस्तक किन? | पुस्तक मिडिया
कम्प्युटर र इन्टरनेट शुरुवातका लागि
बाल खोज मिसिनहरु | इन्टरनेटमा बच्चाहरु